सुचना डबली डेस्क / २०७७, ४ फाल्गुन मंगलवार १८:५२ प्रकाशीत
रुपन्देहि, फाल्गुन ४ । रुपन्देहिमा जिल्ला स्तरीय अन्तर मा.वि टेवल टेनिस प्रतियोगिता हुने भएको छ ।
लियो क्लव अफ बुटवलको आयोजनामा फाल्गुन ८ र ९ गते देविनगरको ओलि पथ स्थित कभर्ड हलमा उक्त प्रतियोगिता हुन लागेको क्लवका अध्यक्ष हिमालय भुसालले जानकारी दिए । खेलाडीको प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने उदेश्यले उक्त प्रतियोगिता आयोजना गरिएको अध्यक्ष भुसालले बताए ।
प्रतियोगिता विभिन्न आठ ईभेन्ट्समा हुनेछ । बिद्यालय तहबाट नै खेलाडी उत्पादन गर्ने हेतुले सब जुनियर्स कक्षा ०५ सम्म, जुनियरतर्फ कक्षा ०६ देखि ८ सम्म सिनियर तर्फ कक्षा ९ देखि १२ सम्म डबल्स इभेन्ट्स प्रतियोगिता गरिने क्लबका पुर्व अध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षक महेश खनालले बताए ।
यस्तै शिक्षक साथीहरू बीचको भाईचारा प्रगाढ गर्न शिक्षकहरुको माझमा पनि प्रतियोगिता हुनेछ । प्रतियोगितामा प्रथम, दोश्रो र तेस्रो हुने बिद्यालयलाई आकर्षक ट्रफी, प्रमाणपत्र प्रदान गरिने र खेलाडीलाई मेडल , प्रमाणपत्र प्रदान गरिने प्रथम उपाध्यक्ष रमेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
प्रतियोगिता जिल्ला भरिका करिब ३०० जना खेलाडी सहभागी हुने कार्यक्रम संयोजक बिनय पटेलले बताए । लियो क्लब अफ बुटवलले बिगत २० बर्ष देखि निरन्तर रुपमा जिल्ला स्तरीय टेबलटेनिस प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आईरहेको छ ।
१. ताप्लेजुङमा आगलागीबाट ३३८ परिवार विस्थापित
२. कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा महाप्रबन्धक पक्राउ
३. बोलेरो ठक्करबाट किशोरीको मृत्यु
४. माइक्रोले तीनवटा सवारीलाई ठक्कर दिँदा ९ जना घाइते
५. विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन